Ny fitiavana tsy izay lazainao. Ny fitiavana no ataonao. - Anony - Quote Pedia
Ny fitiavana tsy izay lazainao. Ny fitiavana no ataonao. - Anonyme
Ny fitiavana dia iray amin'ireo fihetseham-po mahavariana indrindra izay niainan'ny olombelona. Ny fitiavana dia mameno ny singa ilaina rehetra hanasitranana olona anaty anatiny. Ny fitiavana marina sy tsy misy loto dia tsy fitahiana ihany fa fanomezana mandrakizay avy any an-danitra.
Tokony hamelona ny tena fitiavana ary omena fotoana hitombo sy hiely. Ny tena fitiavana dia tsy azo ampitahaina amina safidintsika. Ny tena fitiavana dia miafina amin'ny asantsika. Ny olona tena mifampiahy dia tokony manandrana mifankahazo tanteraka.
Tsy hanisy tombo-kase mahomby ihany izany fa manampy antsika koa hifankahalala tsara. Ny fitiavana tsy misy fepetra, raha niaina ny endriny tena izy, dia iray amin'ireo zavatra sarobidy indrindra izay azon'ny olona iainany mandritra ny androm-piainany.
Tsy misy harena eto amin'izao tontolo izao afaka mividy fitiavana tsy misy loto sy tsy misy fepetra. Ny tena fitiavana dia miafina na dia amin'ny fihetsika kely indrindra izay ataon'ny olona ho an'ny olona ankasitrahany. Ity dia afaka maka ny olon-tianao ho miantsena indray mandeha isan-kerinandro na fividianana voninkazo vitsivitsy fotsiny.
Raha mijery ny dikan'ny zavatra ara-materialy amin'ireto zavatra ireto isika dia mahita fa tsy kely sy tsy mahasamihafa izany. Raha mandinika lalina an'io raharaha io ianao ary manadihady ireo fihetseham-po, dia hitantsika fa ireo fihetsika kely ireo dia tena zava-dehibe indrindra.
Matetika isika dia mandre fampanantenana be dia be ary milaza rehefa mangataka olona iray hanambara ny fitiavanay antsika isika. Raha hitandrina tsara isika dia ho hitantsika fa ireo olona tena tia antsika dia miteny kely ary manao bebe kokoa amin'ny fiainana milamina. Tsy misy vidiny firy io. Ny fihetseham-po avy amin'ny tena marina sy ny fo marina dia tena tsabo.
Ohatra tonga lafatra amin'izany ny reninay. Mijoro eo anilantsika hatrany ny reninay ary manampy antsika amin'ny zavatra rehetra nefa tsy manonona teny fotsiny izy. Ny fitiavana dia tokony ho fampahafantarana ny fihetsika ary tsy teny fotsiny. Ny fitiavana dia azo hazavaina amin'ny tena fihetsika kely fotsiny izay maneho izany tena izy.
Rehefa tsy mahalala olona momba anao ny olona dia manondro hoe iza izy ireo, fa tsy hoe iza ianao. Aza mandray azy manokana. - Anonyme
Indraindray dia nifanena tamina olona tsy manjary nanodidina anay izahay, ary rehefa niantsoantso izy ireo dia nahatsapa…
Aza kivy na oviana na oviana, tsy misy zavatra toy ny fiafarana, fanombohana vaovao ihany. - Anonyme
Ny mitsoka dia tsy zavatra tokony hataontsika amin'ny maha-olombelona. Iray amin'ireo toetrantsika izany…
Aleo ny liona tokan-tena noho ny zanak'osy malaza. - Anonyme
Ity aloha ny fomba fanoharana izay midika fa mety ho liona irery ianao, saingy tena tsara izany.…
Manaova zavatra isan'andro mba hahatongavana ho tanjonao. Mivoaha ary tohizo hatrany. Ataovy fotsiny. - Anonyme
Tsy mora izany ny hahatratrarana ny tanjonao. Azontsika tsara fa asa mafy ny…
Mifoha isanandro ary mankasitraka ny fiainana. - Teny nindramina tsy fantatra anarana: